दशैंमा किन हुन्छ धेरै सवारी दुर्घटना? अनि यसको जिम्मेवार को?
13th October 2021, 02:33 pm | २७ असोज २०७८
काठमाडौं : मंगलवार मुगुको छायाँनाथ रारा नगपालिका वडा नम्बर ७ पिनातपने खोलामा बस दुर्घटना भयो। दशैंमा ३२ जनाको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटनाले सबैलाई मन अमिलो बनायो। बस सडकबाट २/३ सय मिटर तल झरेको थियो। बसमा ४५ जना यात्रु सवार भएको अहिलेसम्म खुलेको छ। दुर्घटनाका कारण अहिलेसम्म खुलेको छैन। तर, प्रारम्भीक अनुसन्धानमा बसको टायर पञ्चर भएकाले हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, लोड तान्न नसकेर हो कि भन्ने पाटोबाट पनि अनुसन्धान गरिँदैछ।
चाडपर्व सुरु भएसँगै काठमाडौं लगायत अन्य स्थानमा सवारी दुर्घटनाहरू बढ्ने गरेको देखिएको छ। त्यसैले प्रहरीले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर ट्राफिक प्रहरीको सक्रियतासमेत बढाउने गरेको छ। मादक पदार्थ सेवन, लापरबाहीको र यान्त्रिक गडबडीको कारण दुर्घटना हुने गरेका छन्। यस्ता दुर्घटनामा सयौँ मानिसले अकालमै जीवन गुमाउनु परेको छ।
यात्रुको चाप बढी हुने, सडकको अवस्था, सवारीको अवस्थाले पनि दशैंमा अन्य समयको भन्दा धेरै दुर्घटना हुने गरेको छ। त्यस्तै, मंगलवार कास्कीको घान्द्रुकमा जीप दुर्घटना हुँदा ८ जनाको मृत्यु भएको थियो। पोखरास्थित हरिचोकबाट छुटेको ग १ ज ६९०० नम्बरको बोलेरो जीप घान्द्रुकको अन्नपूर्ण १०- कलाभीरमा २ सय मिटर तल खस्दा ८ जनाको मृत्यु भएको थियो। दशैंको छेउमा अछाममा पनि सवारी दुर्घटनामा मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको छ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष सवारी दुर्घटना बढेको छ। यसरी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या पनि उतिकै बढेको छ।
पछिल्ला केही वर्ष देशभित्र हुने सडक दुर्घटना बढेर गएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३२ प्रतिशतभन्दा बढीले सडक दुर्घटना बढेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देशभर २० हजार ६ सय ३४ वटा सडक दुर्घटना भएका थिए। त्यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५ हजार ५ सय ५४ वटामात्र सडक दुर्घटना भएको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सडक दुर्घटनाको सङ्ख्या १३ हजार ३ सय ६६ रहेको छ।
चार्डपर्वमा सवारी दुर्घटना बढ्नुमा सरोकारवाल निकायको वेवास्थाले नै भएको पूर्व प्रहरी निरीक्षक सीतारामा हाछुथे बताउँछन्। केन्द्रीयदेखि स्थानीय सरकारले समेत दुर्घटनालाई दीर्घकालीन रुपमा नसोच्दा घटना भएको हाछेथु बताउँछन्। ट्राफिक व्यवस्थापनमा अब्बल मानिएका हाछेथु अहिले ललितपुर महानगरपालिका प्रहरी प्रमुख हुन्।
'सरकारले दशैं जस्ता पर्वमा कति मानिसले सवारी प्रयोग गर्छन्। कति सवारी थप्नुपर्ने हो, सडकको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा कहिले सोचेको छैन। जसको परिणाम दुर्घटना भोग्नु परेको हो,' २८ वर्ष ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका सीताराम हाछेथुले भने।
सडक दुर्घटना बढेसँगै दुर्घटनामा परेर मर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या पनि बढेर गएको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११ प्रतिशतले सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ हजार ५ सय १३ जनाको मृत्यु भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ हजार २ सय ५१ जनाको मृत्यु भएको हो। तर, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने दुर्घटनाबाट मर्नेहरूको सङ्ख्या २ हजार ७ सय ८९ रहेको थियो।
दशैंको समयमा चालक र सवारीधनीलाई बढी रकम कमाउने लालसाले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दा पनि दुर्घटना बढ्ने गरेको र मानिसको मृत्यु पनि धेरै हुने गरेको हाछेथुले बताए।
'सवारी धनी जति यात्रु कोचेर पैसा लिन पायो त्यति नै खुशी, चालक पनि त्यस्तै। कम यात्रु राख्ने, चालकलाई बरु भत्ता दिने जस्ता काम गरेर दुर्घटना न्युनीकरण गर्न सकिन्थ्यो,' सीतारामले भने।
दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते हुने मानिसको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको देखिए। गम्भीर घाइतेहरूको सङ्ख्या पनि ३९ प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभिन्न सवारी दुर्घटनामा ६ हजार ४ सय ५३ जना मानिस गम्भीर घाइते भएका छन्। सबैभन्दा धेरै सवारी दुर्घटनामा पर्नेहरू मोटरसाइकल चालक नै रहेका छन्।
प्रत्येक वर्ष सवारी दुर्घटना बढे पनि कारबाहीको भागिदार भने कोही बन्नु परेको छैन। झन्, चालकको दुर्घटनामा मृत्यु भए केस नै टुङ्गिन्छ। तर, हरेक दुर्घटनामा चालकमात्र जिम्मेवारी हुँदैनन्। सडक, सवारीको यान्त्रिक अवस्थाले दुर्घटना बढाइरहेको हुन्छ।